कुराकानी | Samaj Khabar
० प्रधानन्यायाधीशबाट केही समयअघि मात्रै अवकाश लिनुभएको तपाईंले सडकमै उत्रेर भाषण गर्दा ‘एक्टिभिज्म‘ भयो भनेर ट...
नेपालभित्र मनपर्ने सहर ? -मेरो सबैभनदा प्यारो सहर पोखरा हो । नेपाल बाहिर कुन-कुन देशका सहर घुम्नुभएको छ ? -मैल...
० स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावको परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? – केही ठाउँमा परिणाम अपेक्षा गरेभन्दा फरक आए...
के–के गर्दै छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ? पहिले यहाँ २ साता काम गरें । अहिले कार्यकारी अधिकृत भएको पनि...
यो मान्छेपिच्छे फरक कुरा र नौटंकी अनि हाँसीमजाक ठट्टाले न राष्ट्रलाई राम्रो गर्छ न त जनतालाई नै । यो कोणबाट यो...
सर्वप्रथम त नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई छ । महामन्त्रीको जिम्म...
संसदको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवशेनको सरगर्मी बढेको छ । १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका बयोवृद...
० प्रधानन्यायाधीशबाट केही समयअघि मात्रै अवकाश लिनुभएको तपाईंले सडकमै उत्रेर भाषण गर्दा ‘एक्टिभिज्म‘ भयो भनेर टिप्पणी भएको छ, के भन्नुहुन्छ? – के आपत्ति भयो र? यस्तो अभ्यास अन्यत्र पनि छ। भार...	Read more
नेपालभित्र मनपर्ने सहर ? -मेरो सबैभनदा प्यारो सहर पोखरा हो । नेपाल बाहिर कुन-कुन देशका सहर घुम्नुभएको छ ? -मैले झण्डै ३० देशको सह घुमेको छु । अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, सिंगापुर, बेलायत, चीन...	Read more
० स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावको परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? – केही ठाउँमा परिणाम अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको छ । हामीले जित्ने सुनिश्चित भएको भनिएका केही ठाउँमा परिणाम त्यसअनुसार आएको छै...	Read more
के–के गर्दै छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ? पहिले यहाँ २ साता काम गरें । अहिले कार्यकारी अधिकृत भएको पनि धेरै भएको छैन । यसमा जनताको बुझाइ पनि कम भएको छ । घर सरकारले होइन, जनता आफैंले ब...	Read more
यो मान्छेपिच्छे फरक कुरा र नौटंकी अनि हाँसीमजाक ठट्टाले न राष्ट्रलाई राम्रो गर्छ न त जनतालाई नै । यो कोणबाट यो सरकार पूर्णतया असफल भएको छ ।	Read more
सर्वप्रथम त नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई छ । महामन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ? जिम्मेवारी बढेको छ । थुप्रै चुनौतीहरू अगाडि छन्...	Read more
संसदको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवशेनको सरगर्मी बढेको छ । १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका बयोवृद्ध नेता सुशील कोइराला एक कार्यकाल पुनः पार्टी प्रमुखमा दोहोरिन चाहन्छन् । वरिष्ठ...	Read more
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला पार्टीको १३औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। संविधान जारी भएपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका बाबजूद पनि कांग्रेसको महाधिवेशनका कारण अहिले...	Read more
बद्री पाण्डे युवा नेता, नेपाली कांग्रेस कांग्रेसको १३ औं महाअधिवेशन कत्तिको लागेको छ ? १५ गतेदेखि गाउँ÷नगर अधिवेशन भइसकेको छ । अब माघ २२ गते क्षेत्रीय अधिवेशन र २५ गते जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ...	Read more
कांग्रेस महाधिवेशन आयो, तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? अधिवेशनको लागि पार्टीले विभिन्न तहबाट तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । विभिन्न समितिमार्फत ती तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । जस्तो विधान समिति छ,...	Read more